Seeri Gadaa dhimmoota adda addaa of keessa qaba, fakk. Seera namummaa Kan dhalatee lafa gahe nama kan nama ta’e hundinuu ulfina nameenyaa qaba kkf.... Read more
Seenaa Akkoo Maannoyyee
Bar-durii, giiftiin biyya bulchitu, maqaan ishee Akko Mannooyyee jedhamtu tokkotu turte. Giiftiin kun uummata garmalee rakkisaa turte. Namni hundum... Read more
Hibboon akaakuu tapha aadaa afaaniin labataa gara labataatti lufaa dhufedha. Hibboon haala gaaffiifi deebiin kan taphatamuufi unka gaggabaaboon ka... Read more
Saddeeqa- tapha aadaa Oromoo
Saddeeqni tapha aadaa Oromoo keessaa isa tokkodha. Tphni kun yoomessa keessatti taphatamu, adeemsaafi seera ittiin taphatamuus niqaba. Namni mo’ame... Read more
Gumii - Kora uummataa
Aadaa Dimookraasi Oromoo keessatti ijoon (Muummeen) aangoo namoota guguddoo, kabajamoo harka hin jiru. Abbooti Gadaa warra biyya bulchan harka hin ... Read more
Hojjaa Abbootii Gadaa
Hoogganootni Gadaa Biyya irra adeemanii qachaa keessatti qubachuudhan dhimmoota adda addaa fiixan baasu. Dangaa murta’e jiru keessatti bulchiinsa g... Read more
Jaarmiyaa Mootummaa ol’aanaa fi Araaraati. Geggeesitoota Gadaa biratti abbaan Bokkuu kabaja fi ulfina guddaa qaba. Abbaan Bokkuu kan Gadaa dursu dh... Read more
Hoogganoota amantii waaqeffanaatti, namoota safuu waaqaa fi lafaa beekan, warra obsa qabeeyyi, warra kadhatanii waaqaraa argatan, warra laguu eegga... Read more
Abbootiin Gadaa Oromoo akamiti Hojjatu? Akkuma saboota biraa, mootummaan oromoos haala hoojjaadhaf mijaa’aa ta’een ijaaramee biyya hooggana. Sirni ... Read more
Abbootii Gadaa bara dhibootii
16ffaa keessa Duula Walabummaa gaggeesan
Keessatuu bara 1270 (bara ka’umsa Yukuno Amlak fi moloksicha Takla Hayimanoot) irraa eegalee hanga dhumaa bar-dhibbee 15ffaa tti Oromoon dhiibbaa f... Read more
Wabii: Seenaa aadaa Oromoo
Hibboon akaakuu tapha aadaa afaaniin labataa gara labataatti lufaa dhufedha. Hibboon haala gaaffiifi deebiin kan taphatamuufi unka gaggabaaboon kan dhiyaatudha. Hibboo keessatti tokko gaafataa yoo ta’u, inni biraan ammoo gaafatamaadha; yeroo baay’ees kan taphatan ijolleedha. Hibboon seera ittiin taphatamu qaba. Kanaafuu, yoomessa aadaa uummatichaa murtaa’aa keessatti kan taphatamudha. Hibboon faayidaa guddaa qaba.
Hibboon seeraafi akkaataa ittiin taphatamu qaba. Namni gaafatu ‘hibboo’ yoo jedhu, kanneen gaafataman immoo ‘hib’ ykn ‘hibib’ ykn ‘hibbaka’ jechuun deebisu. Kan gaafatu qaaffii itti fufee gaafata. Namoonni gaafatamanis deebii hibbichaa kennuuf yaalii taasisu. Yoo hibboo sana deebisuu dadhaban kan gaafatu sun biyya yookaan horii naaf kennaa jechuun gaafata. Kana booda, namni gaafate sun seera aadaa taphichaatiin arrabsee erga eebbifatee booda; ”ani kana caalaa sin arrabsuu waraabessi adda booqaa sihaasalaqsu, ani sin abaru rabbi saasakaalu”, kankoo madaalatti kankee qadaadatti” erga jedhee booda deebii itti hima.
Taphni hibboo yoomessa ofdanda’e qaba. Galgala galgala hanga hirbaanni nyaatamutti kan taphatamudha. Sababni hibboon galgala galgala taphatamuufis tokkoffaa, guyyaa guyyaa ijoolleen hojii dhiisanii akka taphatti hindeebineefidha. Inni lammaffaan, sammuu guyyaa hojiidhaan dadhabee oole bohaarsuufidha. Inni biraan ammoo, ijoolleen osoo hirbaata hinyaatiin akka hinrafne tursiisuuf yaadameeti.
Faayidaaa hibboon jiruufi jireenya dhala namaaf kennu olaanaadha. Hibboon dandeettiin waa yaadachuu yookiin qorachuu ijoollee akka guddatuufi jireenya hawaasaa akka hubatan shaakalsiisuuf gahee guddaa niqaba. Hibboon gaaffii iccitii waan of keessaa qabaatuuf, dubbii dhoksaa sana bira ga’uuf, hubannaafi bilchina sammuu gaafata. Adeemsi kun ammoo yaadni namaa akka gabbatuuf gahee mataasaati niqaba. Haaluma walfakkaatuun, jireenya hawaasummaafi barnootaa keessatti ga’ee hibboon qabu guddaadha. Hibboon gaaffii gaafachuun yookiin mormii dhiheessuun naannawaa barsiisuufi dandeettii sammuu cimsuuf ga’ee guddaa qaba. Dandeettii waa yaadachuufi xiinxaluu namaa cimsuuf, ilaalchaafi akkaataa itti yaaduu namaa gabbisuuf shoorri hibboon qabu guddaadha. Hibboon, amala namaas ta’e kan wantotaa, akkasumas kan beeyilladootaa barsiisuuf ga’ee guddaa qaba.
Wabii: Seenaa tapha aadaa Oromoo
Aadaa Dimookraasi Oromoo keessatti ijoon (Muummeen) aangoo namoota guguddoo, kabajamoo harka hin jiru. Abbooti Gadaa warra biyya bulchan harka hin jiru. Ijoon aangoo Gumii uummataa isa wagga saddeet saddeetiin walgahu harka jira, Gumiitu aangoo hunda caalu qaba. Gumiin walgahee seera dabe ni sirreesa, namoota aangoora jiran ni gorsa, yoo balleessaa qabaatan ni adaba. Warra dadhaboo ta’ani fi warra uummata tajaajiluuf fedha hin qabaane immoo ni jijiira, seeroota turan irra deeb’ee in xinxala. Booranatti Gumiin kan waamamu Gadaan tokkoo taayitaa qabate waggoota afur booda. Yeroo Gumiin mari’atu kan Gumii hoogganu jarreen aangoorra jiran miti (isaan ofiifuu waan qeeqamaa jiranuuf). Abbootii Gadaa waara bara afur dura aangoo gad-dhiisanii fi waara isaan duraatu hooggana. Gumiin dubbii kan murteessu sagalee caaladhaan qofaanii miti, yeroo itti baleessee wal-amansiisuu ni yaalaa. Caffee keessatti Abbaan Bokkuu fi Qaalluun sadarkaa walgituurratti argamu.
Hoogganootni Gadaa Biyya irra adeemanii qachaa keessatti qubachuudhan dhimmoota adda addaa fiixan baasu. Dangaa murta’e jiru keessatti bulchiinsa gaarii tolchuu. Diini dangaa sana akka hin seene ittisuu, fakk. Abbaan Duulaa miseensota sadarkaa Kuusaa (qondaala) leenjisee duulaf qopheesa. Bakka bu’ootni Saba Oromoo kun akka Salgee fi Shaneetti of ijaaranii dhimma Bulchinsaa, Siyaasa fi Diinagdee (Misoomaa) irrati hojjatu.
Hojjaa Abbaa Gadaa Fixee (Muummicha)
Koree Gadaa ykn Gumii waamuu, walitti qabuu
Marii, dubbii walgayii irratti godhamu ni hooggana, ni to’atas
Hundee ijoo dubbii, Gumiin irratti walii-gale gabaabsee miidhassee ibsa
Haala ilaalee murtee fudhatamaa qabu dhiheessee yaada maruu
Namoota dubbii fudhachuu didanii mufatan karaa adda addaa itti dhihaatee, eebban, sossobbidhaan araarsuu yaaluu.
Jaarmiyaa Mootummaa ol’aanaa fi Araaraati. Geggeesitoota Gadaa biratti abbaan Bokkuu kabaja fi ulfina guddaa qaba. Abbaan Bokkuu kan Gadaa dursu dha. Ol’aantummaa (aangoo) dhalootan maati angafaa ta’e (fakk. kan Tuulamaa Daacci keessa gosa Galaan jechaadha) keessa argamudha. Tuulammni Bokkuu shan qaba, shananuu harka warra hangafaati argama.
Walumaagalatti Abbaan Bokkuu Hojjaa kanaa gadii qaba
Waliti bu’iinsi uummata gidduutti yoo ka’e tasgabbeesuu, araarsuu.
Humni diinaa dhufee biyya baleessuf yoo ka’ee Abbaa Gadaa wajjin duula Labsuu (akka uummatni ka’u gochuu).
Bokkuun amantaan walqabatee qaama siyaasaa Gadaa kan dursuudha. Kanaafuu yeroo walgayiin Chaffee (Gumii) godhamu eebiisee saaqa.
Hoogganoota amantii waaqeffanaatti, namoota safuu waaqaa fi lafaa beekan, warra obsa qabeeyyi, warra kadhatanii waaqaraa argatan, warra laguu eeggatan, warra yeroo ofii amantiidhaf kennan, warra yeroo eebbisan waaqni dhaga’uu kkf., waara ta’anii dha. Jaarmiyaalee Gadaan ijaaree kessaa kan araara irratti hojjatan tokkoo jaarmiyaa warra Qaalluutti. Qaalluun (Ayyaantuun) yeroo gadoomaa Abbaa Gadaa eebisee ni muuda.
Abbootiin Gadaa Oromoo akamiti Hojjatu?
Akkuma saboota biraa, mootummaan oromoos haala hoojjaadhaf mijaa’aa ta’een ijaaramee biyya hooggana. Sirni Gadaa Oromoo hojjii fiixan baasuuf, Oromiyaa keessa bakka hedduutti hayyoonni akka hojjii raawwachistuutti dalaga warra gaggeessan, nama sagal sagaliin, Salgan Yaa’ii Booranaa kan jedhamaniin, ijaaramannii hojjatu. Isaanis sadeen Abbootii Gadaa, 1. Abbaa Gadaa fiixee, 2. Abbaa Gadaa Mandhichaa fi 3. Abbaa Gadaa Kontomaa kan jedhaman wara duraa yoo ta’an, akasumas Abbaa Muudaa, Abbaa Seeraa, Abbaa Alangaa, Abbaa Sa’aa, Abbaa Biyyaa fi Abbaan Duulaas miessnsota mana maree ti. Jareen kun hojjii raawwachiistuu damee hojjii (waajira) adda addaa ti. Boorana keessatti warri baay’ee barbaachisaa ta’an lakkofni isaani jaha yoo ta’u, isaanis gosoota lamaan Booranaa (Sabboo fi Goona) keessaa namoota sadi sadii kan filamanii dha. Jarreen kun akka ol’aanaafi gadi aanaa odoo hin tain walqixxummaatti wal kabajaa hojjatu. Murteen sagalee baayy’inaan ykn wal-amansiisuu dhaan murama. Booranatti Abbooti Gadaa sadii (Abbaa Duulaa, Abbaa Sa’aa fi Abbaan Muudaa) yeroo fi bakka
Keessatuu bara 1270 (bara ka’umsa Yukuno Amlak fi moloksicha Takla Hayimanoot) irraa eegalee hanga dhumaa bar-dhibbee 15ffaa tti Oromoon dhiibbaa fi roorroo humnoota Kiristaana fi Islaamaa jala akka ture ragooleen hedduun ni jiru. Roorroo kana ittisuurratti gootota fi hayyoota hedduutu wareegame. kanaan kan ka’e sabni Oromoo walakaan (qixxeen) isaa manaa fi biyya abbaa ofii gadi lakkisee waan qabu fudhatee gara kibbaa fi Bahaatti godaane. Achiittis dhiibaan ittuma fufe. Kana booda Oromoon gara waggaa dhiibba tokkootif roorroo kana of-irraa ittisuuf mala dhahaa ture, keessumaa bara Gadaa Gadawwoo Galgaloo 1470s keessa haala karaa lolaattin biyyaa ofii falmanii deebifachuuf akka toluutti of ijaaruun barbaacisaa akka ta’e amanee, hawwaasa umuriin ijaaree, akka umurii isaatti dirqama itti kenne. Gadaan ini calqabaa akka haarati waan ijaarameef “Gadaa mala-haaraa baase ykn Gadaa mala-baase” jedhamee hayyootan moggaafamee, meedhicha hidhate. Maqaan Gadaa kanaa seenaa keessatti Gadaa Melbaa jedhameeti beekama.
Bara Gadaa Melbaa 1522-1530
Gadaan Melbaa jedhamu (1522-4530) Oromoo dhaf Gadaa isa calqabaa miti. Isa duraayyuu bara kuma caaluuf Oromoon Gadaan bulaa akka ture ragaan ni jira. Gadaan Malbaase garuu uummata bara saddeet saddeettin qoodee namoota waggaa 8 olii fi 80 gad jiraniitti dirqama adda addaa kenne. Bara Gadaa kanaa Oromoon calqabaaf Abbaa Duulattiin of ijaaree, akka kana duraa yeroodhuma ormi itti dhufu of irraa ittisuu qofaa dhisee biyya ofii deebifachuuf jecha bakka Habashooni irraa fudhatan dhaqee loluu calqabe. Waraani Oromoo bara sanaa akka waraana qaroomeetti hiriiree loluu calqabe. Gadaan Melbaa Baale deebifachuuf yeroo lolu mooticha Habashaa Faasil jedhamu ajjeese. Gadaan kun lola irratti cimaa akka ture warri habashaatuu (Abbaan Baahireetu) raggaasee ture.
Bara Gadaa Muudanaa 1531-1538
Gadaa Melbaattii aanee aangoo kan qabate Gadaa Muudanaa ti. Bari kun bara warri Kirstaanaa fi Islaamaa (Imaam Ahimadiin hoogganamuu) akka hamaatti wal waraanaa turani. Yeroo kana keessa Oromoon xinnoo afuura argatee akka laayyootti lafa ofii hanga tokko qabate. Waan waaqni diinoota isaa lamaan wal waraansiseef, Gadaa kana waaqatu mirga muude jechuudhan, Gadaa Muudanaa jedhee moggaasee. Gadaan Muudanaa kun seeroota lama daballee tumuudhaan seenaa Gadaa keessatti beekama, isaanis:
1. Lubni hundi akkuma aangoo qabateen akka duulu,
2. Lubni hundi osoo lafa dabalee hin bilisoomsiin meedhacha akka hin hidhaanne kan jedhan ture.
Seerooni kun akka Oromoon jabaatee biyya abbaa isaa deebifatu hedduu gargaare. Gadaa Muudanaatu dura laga Waabee ce’ee lafa qabate jedhe Abbaan Baahire.
Bara Gadaa Kiilolee 1539-1546
Muudanatti aanee kan baalii fudhate, Gadaa kiilolee ti. Bara Gadaa Kiilolee keessa Habashoonni gargaarsa warra Poortugaaliin, Imaam Ahimadiin bara 1543 waan ajjeesaniif qalbii tokkoon Oromoo irratti xiyyeefatanii meeshaa ammayyaa fi human waraanaa Awwroopaa irraa argataniin gargaaramuudhan Oromoo irratti duulani. Mootichi Habashaa (Galaawudoos) Imaam Ahimadiin ida ajjeese booda, waraana guddaa nama Adaal Mabiiraq jedhanuun hoogganamu gara Oromootti bobbaase. Gadaan Kiilolee waraana Habashaa fi Faranjii meeshaa hammayyaa (madfi) hidhate kana bara 1545 of-irraa rukutee, ajajaa waraanaa ari’ee laga Awwash ceesise. Waraani habashaa hedduun harka Gadaa Kiiloleetti baqee dhume jedhe Abbaan Baahire. Humnoota Habashaa fi Faranjii meeshaa hammayyaatti gargaaramanu waan mo’eef, Gadaa dhugaa lole, kan Lole jedhamee seenaa keessati yaadatama. Jechi „kan lole“ jedhu kun bara dheerina keesa „Kiilolee“ jedhamuun beekama. Itti aanee baali kan fudhate Gadaa Biifolee ture.
Bara Gadaa Biifolee 1547-1554
Barri Gadaa Biifolee bara mootiin Habashaa lola warra Islaamaa waliin qabu moo’atee humna isaa mara gara Oromoo qofaatti xiyyeefate ture. Mootichi Habashaa Galaawdos, Adal Mabiraq moo’amuu dhaga’ee humna isaa waliti gurmeesee waraana Portugaal wajjin Oromoo irratti bara 1548 duula guddaa saaqe. Gadaan Biifolee diina itti dhufe qolee, rukuutee moo’uudhan of irraa deebise. Lafa bal’aa dabalee qabachuu dadhabus, humana guddaa kana falmee moo’ee of irraa deebisuu waan danda’eef, waanti hojjate akka gootumaa guddaati fudhatameefii maqaa Bif-oole jedhamu akka argatu ta’e. Bif-oole jechuun odoo hin dabaliin, odoo hin hir’isin akkuma jirutti, bifuma duraan jiruun eegee dabarse jechuu dha. Jechi “Bif-oole” jedhu kun bara dheeraa keessa Biifolee jedhame. Gadaan Biifolee dangaa Oromoo eegee, dirqama ofii raawwatee aangoo gara Gadaa Michilleetti dabarse.
Bara Gadaa Michillee 1554-1562
1. Namni diina hin ajjeefne akka hin fuune, akka rifeensa mataa isaa hin
2. Namni ganna 8 oli fi 80 gadii lola keessatti qooda akka fudhatan,
3. Waraanni Fardaan lolu hedduun leenjifamee akka bobba’u seera jedhu, kun immoo iddoo fagoo deemee akka lolu isa taasise.
Fardaa fi gaachanaan jabaatee loluu kan calqabe Gadaa Michilleetti. Michillee
waraana Galawudos, Hamalmaaliin hogganamu waraanee moo’e, Faxagariin (Ererii fi Karrayyu) guutuummaatti harka Oromooti galche. Itti dabalees hooggani Islaamaa Amir Nuur mooticha Habashaa Galawudosiin waraanee moo’ee (ajjeesee), gammadee ayyaaneffachaa otoo jiru Michille Harariin qabate. Amir Nuur oduu kana dhaga’ee otoo inni gara Haraaritti deebi’uutti jiruu Michille bakka Tulluu Haazaaloo jedhamutti haxxee hidhatee rukute. Lola kana irratti Oromoon hedduun dhumu’ilee waraanni Amir Nuur moo’ame harka Michilleetti baqee raawwate. Abbaan Baahire akka barreesetti Gadaan 5ffaan Missillee jedhamu biyya waraanee moo’atee idda balleesee booda loon ofii fudhatee itti gale jedha. Oromoon durii biyya waraanee waan barbaade idda godhee booda gara dhufeti deebi’aa jechuu isaattii. Seenaa Oromoo keessatti kan akka Gadaa Michillee diinota, warra habashaa (kan Portugaalin gargaarame) akkasumas Afaar (kan Turkiin gargaarame) haleelee dangaa bal’aa bilisoomse hin jiru. Michillee jechuun, bineensa bara caamsaan hammaatee yeroo haroon qooru bakka bishaan ture keessa bahu, bineensa gurraatti hanga saree xiqoo geessu, kan waraanni hin seenne, kan nama hin soodaanne, kan nama duukaa kaattee nama ciniintu, bineensa hamtuu dha. Gadaan Michillee farda luka afur qabu yaabatee gaachanaan waraana of irraa qolatee waan bakka yaade ga‘eef Gadaa Michillee jedhamee moggaafame.
Bara Gadaa Harmufaa fi Gadaa Hambisaa 1563-1570
Gadaan Michillee dangaa bal’aa waan bilisoomseef dangaa bal’aa kana Gadaa tokkoon hoogganuun rakkisaa waan ta’eef Gadaan duraan Boorana fi Baarentuu irraa ijaaramee hooggana tokkoon walfaana socho’aa ture bakka lamatti qooduun dirqama ta’e.
Baarentuu Gadaa Harmufaa akkasumas Boorani Gadaa Hambisaatiin akka hoogganaman godhame. Harmufni Bageemdir rukutee gosati moggaasee of jala galche, Hambisaan immo duula guddaa mooticha habashaa Minaas Oromoo irratti bobbaase jabinaan falmee, balaa dhufu danda’u hambise. Hambisni akka Harmufaa lafa bal’aa dabalee qabachuu baatuus, kan ture akka jirutti eegee dabarsuu waan danda’eef, Gadaa Harmufaa wajjin meedhicha hidhatanii baali dabarsanii Gadaa Roobaleetti kennan.
Bara Gadaa Roobalee 1571-1578
(Roobalee Baarentuu fi Roobalee Booranaa)
Roobaleen lachuu wal gargaarudhaan Bagamdir fi Wallootti duula guddaa bananii (keessatuu Roobalee inni Booranaa Amaaroota hallayyaa fi holqatti naquudhan) dangaa biyyaa bal’dhisuu danda’anii turan. Wa’ee Gadaa Roobalee Abbaan Baahire akkas jedha, waggaa saddeet booda kan bakka Harmuufaa qabate Roobaleen ilma Gadaa Muudanaa ti, isa kan Shawaa balleessee Gojjaamin rukutee, nama aangoo cimaa qabu Azmaachi Zari Yohannis ajjeese jedhe.
Bara Gadaa Birmajii 1579-1586
(Birmajii Baarentuu fi Birmajii Booranaa)
Gadaan Birmajii Baarentuu habashaa Kaabaa akka malee muddee qabuudhan, Dambiyaa rukutee Abooli fi Baahera Nagaash yeroo ajjeesu, Gadaan Birmajii inni Booranaa maqaa Maccaa fi Tuulamaatiin ijaaramee Amaaroota bakka hundaatii ari’ee, lafa fardi isaa seenuu danda’u hundaa qabate. Amaarris gaaratti, hallayyaatti, holqatti galtee dhokatte. “Utuu gaarrii, hallayyaa fi holqi hin jiru ta’ee namni hafu hin jiru jedhe” barreessaan habashootaa Alaqaa Atsimeen.
Bara Gadaa Muul’ataa 1587-1594
(Muul’ataa Baarentuu fi Muul’ataa Booranaa)
Bara Gadaa Muul’ataa kana Walloo hedduu hin duulle. Yeroo lama qofaa Gondoritti duulee deebi’ee qubate jedhama. Muul’ataa Maccaa fi Tuulamaa garuu duula isaa itti fufee. Bifa lolaa geeddaree Amaara karaa irratti gaadee ajjeesuu calqabe. Gaara gidduu fi saqa dhiphoo ta’an gidduutti eegee ajjeesaa, murataa ture. Bakka farda isaaf mijaa’u mara Goojjaami fi Gondor keessa gulufee, qabatee, basha’ee achi taa’e.
Barreesan yeroo sanaa Abbaa Baahire akka jedhetti, biyyi Gadaa Booranaa jalatti bule, kan hafe tokko lee hin jiru jedhe. Muul’atni baalii Gadaa Duulootti dabarsee kenne. Haala kanaan Abbootin Gadaa injiffannoo ida argatanii booda sabni Oromoo hanga sirni Nafxanyaa jaarraa 19ffaa keessa ka’uutti jaarraa lamaa ol tasgabbaa’ee Gadaa isaa kabajataa nagaa dhan jiraataa ture.
@Moti 1 year ago
thanks for sharing Gosa!